Ungayishayela Kanjani Ibhizinisi nge-Twitter namaTweets aKhuthaziwe Martech Zone
Ungayishayela Kanjani Ibhizinisi nge-Twitter namaTweets aKhuthaziwe
NgoMsombuluko, Septemba 1, 2014 NgoLwesibili, Septhemba 2, 2014 Douglas Karr
I-Twitter manje inikela nge imikhankaso ehlukahlukene ukwakha okulandelayo, ukushayela ithrafikhi nokuguqulwa kusayithi lakho, ukufaka izinhlelo zokusebenza, ukuthola ukuhola, noma ukukhuthaza ama-tweets athile.
Ama-Tweets anyusiwe qhubeka nokuvela kumugqa wami wesikhathi ku-Twitter nakuzinhlelo zokusebenza zomdabu ze-Twitter. Ibhizinisi lakho kufanele lisebenzise Izindlela ezinhle kakhulu ze-Twitter, kepha uma ukhokha empeleni ukuthuthukisa iTweet, kunezinto ezithile ongazenza ukuthuthukisa izinga lokuchofoza kumaTweets anyuselwe.
I-interface yamaTweets Akhuthaziwe ivumela umsebenzisi ukuthi achaze umkhankaso wabo, asethe izinsuku zokwenyusa iTwitter, bese ukhetha izethameli ofisa ukuzikhomba.
Lokhu infographic evela kuSocial Samosa inikeza izinyathelo ezithile zokwenza kahle ongazithatha lapho uphromotha amaTweets ukuqhubekisela phambili ukuzibandakanya. Ama-tweets amafushane ajwayele ukwenza kangcono futhi engeza ama-hashtag, ibalula, izixhumanisi, izithombe namavidiyo kuqhuba ukuzibandakanya okuningi. Ukungeza nje uphawu lwesibabazo kuzokwenza khulisa ukubandakanyeka kwakho kwe-Tweet okuphakanyisiwe ngama-43%!
Tags: uphawu lokubekisaindlela yokukhuthaza i-tweetinfographicama-tweets anyusiweUkulungiswa kwe-tweetamathiphu wokukhuthaza we-tweetizikhangiso ze-twitteri-twitter yebhizinisiama-hashtag we-twitterI-twitter infographicizixhumanisi ze-twitteri-twitter ibalulaizithombe ze-twitterukukhushulwa kwe-twitteramavidiyo we-twitter
Isayensi Emangazayo Ebangela Ukuthonya Nokuthonya